बाहुनको छोरो बंगुर पालनमा बार्षिक ५०/ ६० लाख आम्दानी ! - Maxon Khabar
Home / News / बाहुनको छोरो बंगुर पालनमा बार्षिक ५०/ ६० लाख आम्दानी !
बाहुनको छोरो बंगुर पालनमा बार्षिक ५०/ ६० लाख आम्दानी !
वालिङ असार २६,
बिगत ५ वर्षदेखि बंगुर फार्म सञ्चालन गर्दै आएका स्याङजा वालिङ का भीम लुईंटेल वार्षिक ५०/ ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नै गरेका छन । मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा आम्दानी भएपनी खर्च कताउदा ५०/ ६० लाख बचत हुने उहा बताउनुहुन्छ ।
लुईंटेल भन्नुहुन्छ ‘विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेशमै राम्रो कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन समेत चाहेको छु ।
वालिङ –९ पिपलटारीमा १३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि १२ लाखमा भाडामा लिएर व्यवसाय थालेको हुँ,’ लुइँटेलले भन्नुभयो, ‘फार्ममा अहिले १ सय माउसहित २ सय ५० बंगुर छन् ।
लुईंटेलले ५ वर्षअघि २७ लाख रुपैयाँ लगानीमा बंगुरपालन सुरु गर्नु भएको थियो । लुईंटेलको लगानी अहिले ३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको बताउछन ।
कृषि मन्त्रालयको सहकार्यमा ईन्द्रेणी बंगुर उद्योगलाई नमूना फार्मको रुपमा विकास गर्ने काम सुरु भैसकेको छ । त्यस्का लागि १० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वालिङमा मात्रै दैनिक ३ सय ५० किलोभन्दा बढी बंगुरको मासु खपत हुने गरेको बताउनु भयो ।